Archive du 20161227
Voninahitsy Jean Eug�ne Nisitri-belona
Ahatadiavan�ny maro an�i Voninahitsy Jean Eug�ne filohan�ny antoko politika RPSD Vaovao ny nirotsahany hofidiana filoham-pirenena ny taona 2013, ary nanohanany an�i Hery Rajaonarimampianina tany amin�ny fihodinana faharoa. Namorona ny vondrona politika antsoina hoe :
Pr Tsiavaliky C�lestin Atahoran�ny Frantsay ny Malagasy any Atsimo
Ny mpanjanaka antsika no nampiditra olana mikasika ny resaka omby teto Madagasikara tamin�ny alalan�ny fivoizana fa ny
Augustin Andriamananoro Ho afa-bela sa tsia ?
Hanamarika ity andron�ny talata 27 desambra 2016 ity ny fivoahan�ny didim-pitsarana mahahasika an�i Augustin Andriamananoro. Mbola mitana ny sain�ny maro ny raharaha mahavoasaringotra an�ingahy minisitry ny tetezamita, ka nisamborana sy nanagadrana azy.
Senatera Virginie Nanao Bebe Noely tao Moramanga
Ankizy 20 isaky ny fokontany 13 mandrafitra ny kaominina ambonivohitra Moramanga no nahazo fanomezana avy amin�ny Bebe Noely, Senatera Razanajato Virginie.
Da fety be da fety be
Mahatsiaro an�i Jean kely aho izany ry Jean ! Inona aloha no maresaka any aminao any e ? Inona, hono, ny vaovao any amin�ilery iny?
Faly Ramakavelo Tokony hanavotra antsika io volamena io
Mahagaga, hoy ny mpahay toekarena, Faly Ramakavelo, fa tsy tafiditra tao anatin�ny resaka mikasika antsika tao anatin�ny fihaonan�ny mpamatsy vola tany Parisy ny Sinoa kanefa ry zareo mpamatsy goavana indrindra eto.
Tsenan�ny solika 2016 Niaka-bidy matetika ny Gazoala
Nahitana fiakarany matetika ny vidin�ny gazoala sy ny solitany tamin�ity taona 2016 ity, raha ny tatitra voaray avy eo anivon�ny Ofisim-pirenena misahana ny akoranafo na ny OMH etsy Behoririka.
Zavakanto Malagasy Taona mainty ny 2016
Taona maloka ho an�ny sehatry ny zavakanto ity taona 2016 hivalona afaka andro vitsy ity. Tsy mamoha fotamandry fa maromaro ihany ireo mpanakanto nodimandry tamin�ity taona ity.
Antsirabe Voaroba ny biraon�ny Faritra Vakinankaratra
Nisy namaky ny biraon�ny Faritra Vakinankaratra. Nandritra ny fananganan-tsaina omaly alatsinainy no nampandrenesana ireo mpiasa ny fisian�ity tranga ity.
Tetikasa �FIAVOTA� Efa azo ny 8,5 tapitrisa dolara
Mifantoka betsaka amin�ny fanampiana ara-bola ny mponina amin�ny asa fihariana sy ny fanjarian-tsakafo ary ny fidirana an-tsekoly ny tetikasa �FIAVOTA�, ka hahazo famatsiana mitentina 30.000 Ariary isam-bolana avy ny tokantrano miisa 45.000,
Alasora Miara-tapaka ny jiro sy rano
Saika nanerana ny renivohitra sy ny manodidina indray izao no nahitana sy nahenoana fahatapahan-jiro sy rano, ary efa mampiteny ny moana ny zava-misy.
�La Voix d�Or� I Tendry no mendrika
Lasan�i Tendry ny tapakila hihazo ilay toeram-pialamboly malaza eran-tany Disneyland any Parisy Frantsa
Lanin�ny mamba indray ny volabe ?
Toy ny rano mikoriana ny fampanantenana mivoaka ny vavan�ny mpitondra eto, fa ny fanatanterahana dia mbola lavitr�ezaka. Raha misy aza izay mba asa kely atao dia fizahozahoana sy fanaovana propagandy no lasa aloha,